Posted on January 20, 2021 Author admin	Comments Off on ကန့်သတ်ချက်မရှိ
မေဧကရီ မှာ ယောင်္ကျား ရှိပေမဲ. သူ.ယောင်္ကျား ကိုဇော်ထွန်း က နယ်တွင် အလုပ်လုပ်နေတာမို. ၂ လတခါ လောက်သာ တွေ.ရပြီး သူ ကတော. ရန်ကုန် မှာပင် စတိုးဆိုင်ဖွင်.ကာဆိုင်မှာပင် အသက် ၁၅နှစ်ခန်. အိမ် ဖေါ်မလေး သက်စု နှင်. နေတာဖြစ်သည်၊ သူ. စတိုးဆိုင်တွင်အောင်အောင် ဆိုသည်. ၁၈ နှစ်အရွယ် အရောင်းကောင်လေး တယောက်နှင်. ရွယ်တူ အရောင်းစာရေးမလေး ကေကေ နှင်. အိမွန် တို. အလုပ် လုပ်ကြပြီး ည ၁၀ နာရီခန်.အထိဖွင်.ကာ ၀န်ထမ်းများကို ဆိုင်ပိတ်ပြီးလျှင် ကားဖြင်. သူကိုယ်တိုင် လိုက်ပို. ပေးတာမို. အဆင်ပြေလှသည်။ တနေ. နေ.လည်ဖက် လူရှင်းတုန်း မေဧကရီ လည်း […]